गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको उपन्यास 'फातसुङ' सार्वजनिक - MD Media Nepal
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको उपन्यास ‘फातसुङ’ सार्वजनिक
428 पटक हेरिएको
‘फातसुङ’ लेप्चा शब्द हो। यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ, माटोको कथा।
नेपालीभाषी भारतीय लेखक छुदेन काविमोको उपन्यास ‘फातसुङ’ धर्तीको कथा हो। अर्थात्, दार्जिलिङको कथा।
फाइनप्रिन्टले प्रकाशन गरेको यो उपन्यास शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ। यसमा दार्जिलिङ निम्ति लड्ने दर्जनौं युवाको कथा छ, जसका सपना हराएका छन्। यो ती सुस्केराको कथा हो, जसले आफ्नो उमेर गुमाएका छन्।
यो एउटा सहिदको सपना पनि हो, जसका निम्ति हजार जीवन चढाइएको छ।
ठेट दार्जिलिङे लवजमा लेखिएको यो उपन्यास जातीय पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन चियाउने आँखीझ्याल भएको प्रकाशक फाइनप्रिन्टले जनाएको छ।
काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा लेखक खगेन्द्र संग्रौला, युवा लेखक भूषिता वशिष्ठ र उपन्यासकार काविमोले यो किताब सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाली बोलिने भारतीय भेगबाट आएको यो पछिल्लो कृतिमा भाषाका लागि गरिएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पृष्ठभूभिमा कथा बुनिएको छ।
नेपाली भाषाका लागि सन् २०१८ को युवा अकादमी पुरस्कार विजेता काविमोले उपन्यासको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘सन् १९८६ मा पहिलोचोटि अलग राज्य माग गर्दै दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भएको थियो। त्यसमा सयौं मारिए। हजारौंका सपना भत्काइए। फातसुङ त्यही सपनाको कथा हो।’
सन् १९८८ मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलसँगको सम्झौतामा टुंगिएको थियो। त्यसपछि सुरू राजनीतिक संस्कार भयानक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘म त्यही राजनीतिक संस्कारबीच हुर्किएको हुँ। यो त्यही समाजको कथा हो।’
‘नेप्टी-चेप्टी दार्जिलिङ कस्तो छ? दार्जिलिङ सहर बत्तीको लहर बैकुण्ठजस्तै छ,’ दार्जिलिङको पुरानो गीत सुनाउँदै काविमोले भने, ‘के आजको दार्जिलिङ यो गीतजस्तै छ? वा, दार्जिलिङको कथा अरू नै केही छ? मैले यो उपन्यासमा त्यही देखाउने कोशिस गरेको छु।’
कार्यक्रमका वक्ताले वशिष्ठले यो पुस्तक पढ्दा आफ्नो बाल्यकाल सम्झिएको बताइन्। भाषा जातीयताको पहिचान रहेको र फातसुङले त्यसलाई प्रस्ट्याउने उनको भनाइ छ।
‘तिनले मात्र क्रान्ति गर्न सक्छन्, जोसँग पेट छैन भन्ने दृष्टिकोण पुस्तकले उजागर गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भाषा र क्रान्तिको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ। राजनीतिक चेतनाको सूत्रधार भाषा हो। कतिपय अवस्थामा जनताको राजनीतिक चेतना अपूर्ण रहेकै कारण क्रान्ति तुहिएका छन्। फातसुङजस्ता लोकभाषी पुस्तकको महत्ता दूरगामी छ।’
यसले लोकभाषा जीवन्त राख्न पनि सघाउने उनको भनाइ छ। ‘यो पुस्तकले त्यस्तो कथा बोक्छ, जसले धारा १४४ र गाउँमा आउने धाराको फरकपन छुट्याउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्।
अर्का वक्ता संग्रौलाले सानो कलेवरमा आएको पुस्तकले धेरै ठूलो कथा बोकेको बताए। यसले दार्जिलिङको माटोको कथा जीवन्त रूपमा देखाएको उनको टिप्पणी छ।
‘यो पुस्तकमा बोल्न नपरेको भए, म आज अपरेसन थिएटरमा हुने थिएँ,’ संग्रौलाले भने, ‘बोल्नुपर्ने भएपछि मैले सोमबारलाई अपरेसनको समय मिलाएँ।’ दार्जिलिङको कथा बोके पनि उपन्यासले नेपालको अवस्था बुझ्न सघाउने उनले औंल्याए।
नेपालको राजनीतिमा जस्तै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा पनि केही ‘चटके’ पात्र रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता पात्रको पहिचानलाई किताबले उत्तिकै प्राथमिकतासाथ समेटेको बताए।
‘यहाँ ठूलो पात्र अर्थात् गोर्खाल्यान्डका नेतालाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘फातसुङ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका रक्तरञ्जित सपनाको कारुणिक र त्रासद अभिलेख हो। आकारमा सानो, तर अर्थमा ठूलो आममानिसको एक जीवन्तकथा। सरल वृत्तान्त र चित्रमय भाषाको सुन्दर समीश्रण। रुचिकर र आनन्दमयी।’
प्रकाशक अजित बरालले यो उपन्यासले नेपालीभाषी भारतीय लेखकहरूप्रति नेपाली पाठकको रुचि जगाउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘काविमोको लेखन शैली यति विशिष्ट र पृथक छ, फातसुङको पहिलो दुई पेज पढ्नेबित्तिकै उत्साहित भएर मैले लेखकलाई फोन गरेको थिएँ, र भनेको थिएँ, उपन्यास राम्रो होलाजस्तो छ! पढ्दै गएपछि त कायलै भएँ,’ उनले भने।
उपन्यासको मूल्य तीन सय रुपैयाँ छ।
बिबेकले ऐश्वर्याको धज्जी उडाउँदा सोनम आक्रोशित
चलचित्र पत्रकार संघको २० औं वार्षिकोत्सवमा पाँच चलचित्र पत्रकार सम्मान